အချိန်မတော် ညဖက်တွေမှာ ရေချိုးရင် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မယ်ဆိုတာ တကယ်လား…. – Nyi Ma Lay
အချိန်မတော် ညဖက်တွေမှာ ရေချိုးရင် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မယ်ဆိုတာ တကယ်လား….
By Nyi Ma LayPosted on May 10, 2021
ညဖ က်မှာ ရေချိုးရင် ဘာဖြစ်မ လဲဆိုတာ ညဘက်ရေချိုးတ တ်တဲ့ပရိ သတ်ကြီးတို့လည်း ဗဟုသု တအနေနဲ့သိအောင် ပြန်လည်မျှဝေပါတယ်…လူတိုင်းလိုလို ကိုယ်ခန ္ဓာနုပျိုလန်းဆန်းေ နတာကို အလိုရှိကြပါတယ်။
ရေချိုးြ ခင်းဟာလဲ ခန ဓာကိုယ်လန်းဆန်း သွားအောင်လု ပ်ဆောင်ခြင်းထဲမှ တမျိုးအပါအ ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညဖက်ပိုင်းမှာ ရေချိုးခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်သလားဆိုတာကို လေ့လာကြည့် ရအောင်ပါ။ရေ ချိုးခြင်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓာ အပန်းပြေ သွားအေ
ာင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆော င်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တနေကုန်အလု ပ်ထဲမှာစိတ်ရော ကိုယ်ပါ ပင်ပန်းလာခဲ့ တဲ့အတွက် ညနေဖက်မှာ သင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာ ပြန်လည်လန်းဆန်းဖို့တခုခုလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ညပိုင် းမှာ ရေချိုး လိုက်ခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာခံ နိုင်စွမ်းရည်အားကို ပြန်လည်မြှင့်တ က်စေပါတယ်။ ညပိုင်းမှာ ရေချိုးမှုနဲ့ပက်သက်လို့ အယူအဆ ကွဲလွဲမှုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ တချို့လူတွေက ဒီလိုရေချိုးြ ခင်းဖြင့် ကိုယ်ခန် ဓာကို
ထိခိုက်စေ မယ်။ ဖျားနာမှုနဲ့ ရောဂါတွေ ရရှိနိုင်မယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ ပညာရှင်များကတော့ထိခိုက်မှု ရှိနိုင်သလားဆိုရဲ့ အဖြေကတော့ “နိုး(NO)” တစ်လုံးထဲပါတဲ့။ ညဖက်မှာရေချိုးလို က်လို့ထိခိုက်မှုြ ဖစ်စေတယ် ဆိုတဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ အေ ထာက်အထားများ မတွေ့ရှိရဖူးလို့ ပြောပါ တယ်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုအကျိုး ရှိသလဲ?ေ ရနွေးနွေးလေးနဲ့ ချိုးလိုက်ရင် အရေပြားပေါ်ရှိ အဆိပ်အတောက်များ ကိုဖယ်ရှားပေးကာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ေ စပါတယ်။မ အိပ်ခင်မှ လန်း ဆန်း
ပြီး သန့်ရှင်းနူး ညံ့တဲ့ ခံစားမှုကို ရရှိစေပါတ ယ်။ စိတ်ဖိစည်းမှု သက်သာစေပြီး သွေးပေါင်ချိန် လျှော့ချစေပါတယ်။ တနေ့ကုန် ပင်ပန်းလို့ကုန် ဆုံးသွားတဲ့အားအင်တွေ ကိုဖြည့်ပေးပါတယ် ။တနေကုန်ပင်ပန်းလာြ ပီး လေ့ကျင့်ခန် းလုပ်ရင်
တေ ာင် တောင့် တင်းနေတဲ့ ကြွက်သားေ တွဟာ ရေချိုးခြင်းဖြင့် ဖြေလျှော့ပေးနိုင် ပါတယ်။ရေနွေးနဲ့ ချိုးလိုက်ရင် အရေပြားကို ချေမွတ်ပြီး ပျော့ပြောင်းစေကာ ရေချိုးပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက်နု ပျိုလန်းဆ န်းခြင်းကိုခံစားရရှိစေသည်။ ရေချိုး
နေစဉ် အချိန်လေး အတွင်းမှာပင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ပျောက်ကွယ်ကာစိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်စေသည်။အံ့ဖွယ်အချက်တခုကတော့ ညဖက်ရေချိုးခြင်းက ကောင်းသော ကိုယ်သင်းရနံ့ကို ပေးသည်။အသား အရေ နူးညံ့ သည့် ခံစားမှု
သန့်ရှင်း တက်ကြွြ ခင်းနှင့် ကောင်းမွန်သော ကိုယ်သင်းရနံ့တို့ကအိပ်ယာဝင်ချမ်းသာသုခကိုအထောက်အကူပေးသည်။ ထို့ကြောင့် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျှော်စေသည် ။အိပ်မပျှော်ခြင်း ၊မျက်စိကြောင်ခြင်းများ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အလုပ်မှာပင်ပန်း
တယ်ဆိုပြီး ချွေ သံတရဲရဲနှင့် တန်းမအိပ်ပါနှင့်။ ရေချိုးခြင်းက စိတ်ရောကိုယ်ပါအပန်းေြ ပစေတဲ့အတွက် ခွန်အားသစ် ပြန်လည်ရရှိအောင် ရေချိုးပါ။ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွ င်းမှာတဖြည်းဖြည်း ချင်းပြောင် းလဲလာတာကို ခံ
စာ းရပါလိ မ့်မယ်။ ညဖက်မှာရေချိုးရင် ဒါလေးတွေတော့ သတိ ထားပါ။ခေါင်းေ လျှာ်ရင် မအိပ်ခင်မှ ခြောက်အောင် သုတ်ပြီးမှအိပ်ပါ။မိမိ ကိုယ်အပူချိန်ဟာ နေ့ခင်းဖက်မှာထက် လျှော့ကျနေတာကို သတိပြုပါ။ နှစ်နှစ်ခြို က်ခြိုက်အိပ်ပျှော်ချင်
လို့ ရေချိုးတာဆိုရင် မအိပ်ခင်ကလေးမှာ ရေချိုးပါ။ ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးစမှာ ချွေးပေါက်လေးတွေ ကျယ်ေ နတဲ့အတွက် ချက်ခြ င်းရေတန်းမချိုးပါနဲ့။မိနစ် ၃၀ခန့် ဆောင့်ပြီး ကိုယ် အပူချိန်လျှေ ာ့ကျသွားကာ ချွေးပေါက်
တွေပြန်ကျဉ်းသွား တဲ့အတွက် အဲဒီအ ချိန်မှာရေချိုးပါ။ညဖက် အတော်ေ နာက်ကျမှ ချိုးရင် ရေနွေးနဲ့ချိုးပါ။ရေနွေးနဲ့ မချိုးခင်မှာ ရေအပူချိန်ကိုလ က်နဲ့ထိတွေ့ခံစားကြ ည့်ပါ။ပုံမှန်အားြ ဖင့်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အ ပူချိန်ထက် ၅ ဒီကရီပို၍ လက်
ခံ နိုင်သည်။လူတေ ယာက်၏ သာမန်အ ပူချိန်ကတော့ ၉ရံ ဖါရင်ဟိုက်၊ ၃၆ ဆာဆီယပ် ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်လက်ခံနိုင်တဲ့မပူလွန်း မအေးလွန်း အနေအထားကို ရယူပါ။ရေချိုးခြင်းဟာ ကိုယ်နဲ့စိတ်ကို သဘာဝ အတိုင်း ပြန်လည်
လန်းဆန်းတက်ြ ကွအောင် လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်အိပ်ပျော်ရုံ မဟုတ်ပဲ အိပ်မောကျ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်အောင် အထောက်အ ကူပေးပါသည်ဟု တင်ပြလိုက်ရပါသည်…ဝင်းလှိုင်ဦး. ဖတ်မိသမျှ ကျန်း မာရေး ဗဟုသုတ။
Source ; ဝင်းလှိုင်ဦး
Previous post Silica Gel Bags ……….. ဒီလို အထုတ်လေးတွေရရင် လွှင့်မပစ်ပါနဲ့ သိမ်းထားပါ…
Next post ထူးထူးခြားခြား ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ပြည့်နေသောနေရာများ